फ्रान्स आचरण को शीर्षक: विवरण, इतिहास र वर्गीकरणका
मध्य युग देखि फ्रान्स को क्षेत्र मा र 1871 द्वारा त्यहाँ प्रभुहरूका धेरै भागमा विभाजन थिए जो एक सिस्टम थियो। महान शीर्षक र आफ्नो वर्गीकरणका आज ठूलो चासो छ। को अभिजात वर्ग र आफ्नो सन्तान को प्रतिनिधिहरु, प्रेस को scrutiny अन्तर्गत निरन्तर हुन् शो व्यापार तारा र प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ संग यो, अचम्मको छैन।
फ्रान्सेली राज्य शिर मध्ययुगीन राजा थिए। सर्वोच्च शासक विशिष्ट क्षेत्र थिए Dukes र ठूलो रेखांकन - यो तहगत प्रणाली को अर्को स्तरमा suzerains थिए। तथापि, धरती मा आफ्नो शक्ति शाही गर्न लगभग बराबर थियो। त्यसपछि डोमेन, benefices वा सेवाको लागि जारी allotments र fiefs, सेवा र वंशानुगत लागि प्रदान को मालिक आए। यी शासकहरुले विभिन्न शीर्षक थियो। यसलाई कुनै पनि feudal प्रभु एक suzerain र डोमेन मालिक र benefice हुन साथ सक्ने रोचक छ।
Le रोइ (राजा)
पहिले नै उल्लेख, यो मध्ययुगीन फ्रान्स को आचरण को सर्वोच्च शीर्षक छ। धारकों विभिन्न अवधि मा तिनीहरूले ठूलो वा कम शक्ति endowed थिए। फ्रान्सेली राजाहरूको उच्चतम शक्ति विशेष गरी लुइस XIV को शासनकालमा absolutism को युग मा भएको थियो।
Le Duce (ड्यूक)
यसलाई मा रूपमा रूसी अनुवाद भएको थियो जो फ्रान्सेली राज्य, मा उच्चतम शीर्षक पहनाया छैन "ड्यूक।" यो मूल कुलका मुख्य नामित थियो विश्वास र फ्रान्सेली इटालेलीहरू र जर्मन राजाको विषयहरू छँदा Carolingian समयमा देखा छ। व्यक्तिगत क्षेत्रको शासक - को Frankish राज्य गठन र विस्तार समयमा Germanic Dukes तिनीहरूले रेखांकन पालन व्यक्ति को राजा को अधिकारीहरु गर्न लागे।
Le मार्क्युज (Awnings)
फ्रान्स आचरण यी शीर्षक Charlemagne अन्तर्गत खडा गरेका छन्। ब्रान्ड - आफ्नो नाम सीमाना प्रशासनिक एकाइ को नाम आउँछ। यो मार्क्युज क्षेत्र को शाही राज्यपाल थियो भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
Le Comte (गणना)
त्यसैले यो एक शाही सेवक एक विशेष क्षेत्र नियन्त्रण गर्न र न्यायपालिका को कार्य खेती गर्न अख्तियार गर्ने भनिएको थियो। उहाँले महान शीर्षक र लगभग एकल-handedly को मार्क्युज पछि हाइरार्खीमा निम्न थियो, केवल केही प्रश्न अपवाद संग, उहाँले आफ्नो काउन्टी शासन गरे। खैर, शब्द Comte सैन्य क्रममा स्थिति संकेत, "प्रान्तीय कमान्डर" नाम थियो।
Le Vicomte (विस्काउंट)
फ्रान्स आचरण को शीर्षक मा पारित। यो कार्य विभिन्न नियमहरू लागि विभिन्न समयमा। उदाहरणका लागि, जो ग्राफ को प्रारम्भिक अवधि एक substituent पछि प्रतिनिधित्व गर्दछ, र विस्काउंट को शीर्षक, एक साना पुरुष राजकुमार मार्क्युज र रेखांकन, साथै आफ्नो सन्तान लगाउँथे।
Le दिग्गज (दिग्गज)
फ्रान्स आचरण को शीर्षक एकदम धेरै थिए। आफ्नो वर्गीकरणका समावेश र दिग्गज कदम हो। त्यसैले भनिन्छ feudal प्रभुहरूका आफ्नै डोमेन, जो, हुनुको राजा को vassals सीधा, आफूलाई आफ्नै प्रजा को एक सार्वभौम छ। फ्रान्स, यो शीर्षक कम साधारण को थियो।
Le Chevalier (Chevalier)
फ्रान्स आचरण को शीर्षक आफ्नै डोमेन छैन गर्नुभयो जो यस वर्ग, ती प्रतिनिधिहरु थिए। तिनीहरूले सेना को बाँध्न सामेल र chivalry को सबै भन्दा को हिसाब। शब्द "Chevalier" एक भारी सशस्त्र सवार हो। पश्चिमी युरोप मा accolade मूल उनको अधिपति गर्न सैनिक सेवा को स्वीकृति चाहनुभएको। लोयल्टी लागि Chevalier श्री वंशानुगत fief र जीवनको लागि benefices प्राप्त।
फ्रान्स पुरानो अर्डर जुनियर महान शीर्षक - equier (ekyuye)। तिनीहरूले एक जागीरदार नामित र शाब्दिक यो अर्थ "वस्त्र"। साथै, आफूलाई सुसज्जित गर्ने सकिएन र सुसज्जित व्यक्तिगत स्वतन्त्रता महान छोराछोरी, तथाकथित। जागीरदार सेवा Chevalier fief वा benefice स्वामित्व अधिकार जीत लागि मात्र विकल्प थियो। तर, जो कारण, हासिल थिएन squires, भाग इच्छित र बाँकी बस Monsieur डे (नाम)। समय, यो वर्गले Chevalier एकिकृत।
मध्य युग मा फ्रान्स, यो जेठो को सही प्राथमिकता दिन्छ। यो जेठो छोरा को शीर्षक आफ्नो मालिक जन्मजात पापीलाई। यस मामला मा, केटा परिवार भ्रमण अघि जन्म छोरी यो सही deprived गरिएको थियो।
जबकि उनको पिता अझै जीवित थियो, छोरा अभिभावक भन्दा रैंक मा एक तथाकथित शिष्टाचार शीर्षक कम पाए। उदाहरणका लागि, ड्यूक गर्न हकदार को मार्क्युज भयो। एक आफ्नो स्थान निर्धारण गर्न, फ्रान्सेली अभिजात वर्ग को हाइरार्खीमा एक विशेष सज्जन को स्थिति ठान्नुहुन्छ गर्दा नै समय, आफ्ना पिताको शीर्षक को आधारको रूपमा लिइएको थियो। अर्को शब्दमा, ग्राफ ड्यूक छोरा छ, यो जसको पिता मार्क्युज थियो "सहकर्मी", भन्दा उच्च थियो।
सामान्यतया उच्चतम अभिजात वर्ग त कहिले काँही आफ्नो सन्तान मृत्यु आफ्नो पुरानो नातेदार प्रतिस्थापन थियो, धेरै शीर्षक, परिवारमा रहेका जो थियो। उदाहरणका लागि, छोरा आफ्नो हजुरबुबा मृत्यु पछि ड्यूक भयो भने, उहाँले आफ्नो नाति गणना ठाउँ लिए।
फ्रान्स र बेलायतमा आचरण को शीर्षक सामान्यतया पुरुष लाइन मार्फत प्रसारित छन्। महिला लागि जाँदा, तिनीहरूले दुई तरिकामा आफ्नो मालिक बन्न। पहिलो विकल्प - आफ्नो बुबा प्राप्त गर्न - यो एक विवाह र दोस्रो हो। उत्तरार्द्ध मामला मा, यो महिला कुनै विशेषाधिकार दिए जो शिष्टाचार को शीर्षक, फेरि थियो। एक महिला ड्यूक संग विवाह गरेर Duchess, उदाहरणका लागि, हुँदा स्थिति फरक छ। यसले पति जस्तै पदानुक्रमित स्तर मा प्रदान गरिएको थियो, र सबै, उहाँको पछि लागे जो पुरुषहरु सहित बाइपास चाहनुभएको। साथै, उदाहरणका लागि, दुई तलको मार्क्युज जसको पति शिष्टाचार शीर्षक थियो र आफ्नो अभिभावक मृत्यु पछि हकदार थिएन थियो।
फ्रान्स एकै समयमा जो महिलाहरु unconditionally परिवार शीर्षक, अर्थात् हकदार सकेन अनुसार, उत्तराधिकारी Salic व्यवस्था गरे ड्यूक छोरी आफ्ना पिता कुनै पुरुष राजकुमार थियो भने पनि एक Duchess बन्न गर्दैन।
फ्रान्स को सबै भन्दा प्रसिद्ध भव्य घरहरू
घर डे Montmorency।
को जीनस 10 औं शताब्दीमा देखि ज्ञात र फ्रान्स, 6, 12 marshals, प्रधान, धेरै एडमिरल्स को कान्स्टेबुल, साथै विभिन्न knightly आदेश मालिकको, र धेरै चिरपरिचित सार्वजनिक तथ्याङ्कले दिनुभयो गरिएको छ।
1551 मा ducal शीर्षक प्राप्त गर्ने परिवार मा पहिलो एनी डे Montmorency थियो।
यो घर Navarre मा एक शाही बन्ने, यो तहगत प्रणाली को धेरै शीर्ष पुगेको छ। साथै, यसको प्रतिनिधिहरु (यूहन्ना d'Albret) को एक ड्यूक Vendomskogo विवाह गरे। यो विवाहमा Navarre भविष्य राजा पहिलो फ्रान्स र हेनरी चतुर्थ जन्म भएको थियो, त्यसपछि।
मध्य युग मा नै नाम संग काउन्टी बारम्बार भयो contention एक हड्डी। साथै, यो Salic व्यवस्था विपरीत भयो जो केही उत्तराधिकार थियो। पछि यसलाई बुरगुण्डी को काउन्टी भाग भयो। 1482 मा, मुलुकमा शिर्षक Habsburgs गए। तथापि, 1659 मा यो फ्रान्सेली protectorate अन्तर्गत फर्के र काउन्टी मूल्याङ्कन गरिएको थियो। यस मामला मा, मालिक फ्रान्स को एक peerage प्राप्त, र यो जीनस सदस्यहरू को पछि एक फ्रान्स चार्ल्स नवौं राजा थियो।
राजकुमार डे CONDE।
फ्रान्सेली शाही परिवारको यो छात्रा सैनिक शाखा 1830 मा आफ्नो लोप सम्म राज्यको सामाजिक र राजनीतिक जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका। यसको इतिहास भर, यो परिवार बारम्बार सिंहासन दावी छ र विभिन्न जायदाद संलग्न थियो।
रड टाढा फ्रान्स परे यसको प्रभाव विस्तार भएको लागि जानिन्छ। dynastic विवाह को फलस्वरूप 12 औं शताब्दीमा यसको प्रतिनिधिको साइप्रस र यरूशलेमका शासकहरू भयो, र 13 औं शताब्दीमा अर्मेनियाई राज्यको सिलिसिया देशहरू हुँदै र एन्टिओक को राजकूमारद्घारा शासित राज्य को राजा भए। तिनीहरूलाई धन्यवाद, फ्रान्स शीर्षक को आचरण को वर्गीकरणका र आंशिक राज्य हस्तान्तरण।
Valois-anjou को घर।
को जीनस को प्रतिनिधिहरु नेपल्स को राजा र पुरातन Capetian को शाखा मध्ये एक थियो। 1328 मा आफ्नो प्रवक्ता फिलिप छैटौं फ्रान्स को सिंहासन आए। फ्रान्स राजा - उहाँले आफ्नो जन्मजात, तर किनभने आफ्नो भान्जा गर्न पुरुष शासकका कमी को छैन प्राप्त। सम्म सिंहासनमा हेनरी चतुर्थ पारित छैन राजवंश लागि2भन्दा बढी शताब्दीयौंदेखि शासन गरे।
अब तपाईं वर्गीकरणका थुप्रै स्तर साधारण nobleman र फ्रान्स शीर्षक, ब्रिटेन या अन्य पश्चिमी युरोपेली देशहरूमा उच्चतम आचरण आयोजित मानिस विभाजित कसरी थाहा छ। आज, साधारण मान्छे जस्तै बाँच्न एक मात्र ठूलो नाम जन्मजात र शायद उनीहरूको नीलो रगत प्रवाह गर्ने आफ्नो पुर्खाहरूको सम्झना गर्ने आफ्नो सन्तान, धेरै।
Polyakov दिमित्री: जीवनी दोहरी एजेन्ट
Hazaras - यो हुनुहुन्छ? Khazars, Pechenegs र Cumans
इतिहास igil: जग को मिति, सरकार को फारम
Svyatoslav, राजकुमार कीव को: छवि र कैरेक्टराइजेशन
Geese रोम सुरक्षित, वा प्राणीविज्ञान को इतिहास मा
कीरा नियन्त्रण: अरिङगाल उन्मुक्ति कसरी
चयन नियम: को मीटर राम्रो के हो?
बिरालोहरु मा Conjunctivitis: लक्षण, उपचार
घर मा बाख्रा पनीर कसरी खाना पकाउनु
जोरजियन भोजन: नुस्खा khinkali
यो कवि Dzhordzh Bayron: जीवनी र काम
गिटार खर्च कति हुन्छ? मूल्यलाई असर गर्ने कारकहरू
स्विट्जरल्याण्ड मा सबै भन्दा राम्रो स्की रिसोर्ट्स
होटल "Aristocrat" कोस्ट्रोमा: ठेगाना, कोठा को वर्णन, समीक्षा
स्वस्थ जीवन शैली: परिभाषा। एक स्वस्थ जीवन शैली र यसको घटक के हो
कसरी "capricious" कश्मीरी को वस्त्र मा छर्रे छुटकारा गर्न?